Hillary Clinton oo uga digtay wadamada qaaradda Afrika istcimaar cusub oo ay galaan – SBC
Hillary Clinton oo uga digtay wadamada qaaradda Afrika istcimaar cusub oo ay galaan
Lusaka:- Xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka haweenayda lagu magacaabo Hillary Clinton oo socdaal ku mareysa dalal kamid ah qaaradda Africa ayaa isweydiisay awooda sii koraysa ee dowladda China ee qaaradda Africa islamarkaana u digtay dalal ay ku tilmaamtay in ay yihiin saaxiibadda China ee qaaradda Africa.
Clinton ayaa u sheegtay TV laga leeyahay dalka Zambia oo ay ka bilowday lugtii ugu horeysay socdaal shan maalin qaadanaya oo ay ku marayso dalal kamid ah qaaradda Africa in dowladda mareykanka aysan doonayn in ay aragto isticmaar cusub qaaradda Africa dhexdeeda.
Clinton waxa ay cabarabaabtay in dalalka maalgeshiga ku sameenaya qaaradda Africa looga baahan yahay in ay qaaradda u faa’ideeyaan iyagana ka faa’idaan balse aan loo baahnayn in ay wiiqaan maamul wanaaga qaaradda Africa.
Dowladda China ayaa sanaddii 2009 ku harqisay qaaradda Africa tobanaan bilyan oo dollar iyadoo sidoo kalana uu kobcay dhaqaalaha qaaradda iyo kan xukuumadda Beijing .
Clinton waxa ay carabaabtay in dowladda Mareykanka ay dadaal ugu jirto dhiirigelinta maamul wanaaga siyaasad iyo dhaqaale ahaan sida dowladda Zambia.
Clinton waxa ay sheegtay in qaaradda Africa ay suurtagal tahay in dalalka Asia ay ka kororsato habka xukuumadaha ay u taageeraan koboca dhaqaalaha ee dalalkooda balse aysan ka dhigan Karin ku dayasho wanaagsan dhanka siyaasadda.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa in ay Socdaalkeeda ku marto dalalka Tanzania iyo Ethiopia halkaasi oo ay diirada saari doonto ololaha madaxweyne Brack Obama ee kaalmaa qaaradda Africa si wax looga qabto dhibaatooyinka cudurka AIDS-ka iyo xoojinta kooboca dhaqaale ee qaaradda Africa.